Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामा ८१ हजार हेक्टरमा रोपाइँ [कुन जिल्लामा कति ?]
वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामा ८१ हजार हेक्टरमा रोपाइँ [कुन जिल्लामा कति ?]
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशको १३ जिल्लामा असार मसान्तसम्ममा ८१ हजार हेक्टर खेती योग्य जमीनमा धान रोपाइँ सकिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा समयमा नै वर्षा भएको कारणले नदी, खोला, नहर र आकाशे पानीले रोपाइँ समयमा गरिएको बताइएको छ । कतिपय ठाउँमा अझै रोपाइँ जारी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १३ जिल्लामध्ये चितवनमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ सकिएको छ । चितवनमा २८ हजार ६०० हेकटर क्षेत्रफलमध्ये १८ हजार ५९० हेक्टरमा रोपाइँ गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालयका कृषि अधिकृत दीपेन्द्रमणि लामिछानेका अनुसार मकवानपुरमा सात हजार ७०० हेक्टर जमीनमा रोपाइँ सकिएको छ ।
त्यस्तै काभ्रेप्लान्चोकमा सात हजार १५० हेक्टर र सिन्धुपाल्चोकमा पाँच हजार ५०० हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटमा १४ हजार ५०० हेक्टर जमीनमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात चार हजार ३०० हेक्टर र रसुवामा एक हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात ३८२ हेक्टर तथा ललितपुरमा चार हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात चार हजार १८० हेक्टर जमीनमा रोपाइँ सकिएको छ ।
रामेछापमा आठ हजार ८१० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात चार हजार ९३३ हेक्टर र दोलखामा दुई हजार ९२० हेक्टरमध्ये एक हजार ९८५ हेक्टर अर्थात ६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धानखेतीतर्फ किसानले जोड दिएपनि समयमा मल र गुणस्तरीय धानको बीउ नपाउनु किसानको समस्या रहेको मकवानपुरगढीका रामप्रसाद भण्डारीको गुनासो रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १, २०७८, २३:१४:००